एमाले – माओवादी केन्द्र बीच यसरी हुनेछ पार्टी एकता::Digital News Paper
१हस्तमैंथुन गर्न जान्यो भने यस्ता हुन्छन ७ फाइदाहरु ! हस्तमैथुन कति पटक गर्ने ?
२यी १० लक्षण देखिएमा बुझ्नुस् तपाईंलाई पनि क्यान्सर लागेको हुन सक्छ ?
३यि दर्जन गल्तीहरु जुन टावेलको प्रयोग गर्दा हुन्छन्, भुलेर पनि नर्गनुहोस् यस्ता गल्तिहरु
४उत्कृष्ट १५ उत्प्रेरक भनाईहरू, जसले तपाईकाे जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्छ !
५गर्भवती बिरालो मार्नेलाई २ वर्षकाे जेल सजाय !
६सुशासनको नारा दिएको कम्युनिस्ट सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब
७तपाईको भाग्य कति वर्षदेखि चम्कन्छ ? हेर्नुस् यसरी आफैं थाहा पाउन सकिन्छ !
८कसरी गर्छ सर्पले सेक्स ? थाहा पाउनु भयो भने अचम्म पर्नुहुने छ !
९यस्तो छ नयाँ साइबर कानून, के-के गर्न पाइँदैन सामाजिक सञ्जालमा ?
१०हामी गोविन्द केसीलाई मार्न तयार छौँ : गगन थापा
१२यी हुन् दुनियाका सबै भन्दा हट फिगर भयका मोडेल (हेर्नुहोस फोटो)
१३पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?
१४पर्वतमा भयानक बस दुर्घटना, तीन जनाको घटनास्थमै मृत्यु ,३८ जना घाईते
१५ओली र देउवाले वाइडबडी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने सहमति गरेको खुलासा !
एमाले – माओवादी केन्द्र बीच यसरी हुनेछ पार्टी एकता
भक्तपुर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आज साँझ ओली निवास, बालकोटमा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा दुई पार्टीका अध्यक्ष ‘वान टु वान’ ९सहयोगी बिना० वार्तामा बस्नु भएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बुधबार बैंकक जाने तय भएपछि त्यसअघि नै समझदारीको प्रयास स्वरुप भेटवार्ता भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली राजा महाराजा होईन र सन्त महन्त पनि होईन : झलनाथ खनाल
१ अब, गोरखाली समाज बेल्जियमले विकट गाउँहरूका लागि ‘एम्बुलेन्स’ दिने
२ कानुनभन्दा माथि व्यक्तिको अनसन हुँदैन – प्रधानमन्त्री ओली
३ हस्तमैंथुन गर्न जान्यो भने यस्ता हुन्छन ७ फाइदाहरु ! हस्तमैथुन कति पटक गर्ने ?
४ आउदै गरेको भ्यालेन्टाइन डे कुन राशिको लागि कस्तो ?पुरा पढ्नुहोस् ….
५ यी १० लक्षण देखिएमा बुझ्नुस् तपाईंलाई पनि क्यान्सर लागेको हुन सक्छ ?
६ तपाईको भाग्य कति वर्षदेखि चम्कन्छ ? अब यसरी आफैं थाहा पाउनुहोस् !
७ शुटीङ्ग सेटमै आएर हरिहरको गर्लफ्रेण्डले गरिन हङ्गाम : पोखरामा भयो बबाल ,भिडियाे सहित
८ १५ करोड लगानीमा सिङगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोक स्टार, अडिसन सुरु !
१ यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी !
२ यी हुन् उमेर छिप्पिएपछि पाको उमेरका धनाड्यसँग लगनगाँठो कस्ने नेपाली नायिकाहरु !
३ अन्ततः कोमल वलीले गर्ने भइन् विवाह,को हुन् हुनेवाला पति ! सार्वजनिक गरिन् मिति
४ आफ्नै जहाजमा घुम्छन यी ४ बलिउड नायिका, नाम सुन्दा अचम्म लाग्नेछ (हेर्नुस भिडियो)
५ यी हुन् दुनियाका सबै भन्दा हट फिगर भयका मोडेल (हेर्नुहोस फोटो)
६ पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?
७ यति धेरै साथ र माया दिएका रुपा मगर वलीलाई अपाङ्गसंग सेल्फी खिचेर लखपति हुदैछ सग्ली भनेपछी – मुकन्दे घिमिरे !!! हेर्नुस जस्ताको तस्तै स्टाटस !!
८ नेपालको सबैभन्दा बढी गर्भपतन हुने जिल्ला कुन हो ? थाहापाउनुहोस् |
९ महिलाको ओठबाट पत्ता लगाउनुस उनीहरुको यौन व्यवहार
१० तपाईको जन्मिएको महिना कुन हो ? हेर्नुहोस् यी महिना मा जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् अर्बपति ….
१ शुटीङ्ग सेटमै आएर हरिहरको गर्लफ्रेण्डले गरिन हङ्गाम : पोखरामा भयो बबाल ,भिडियाे सहित
२ १५ करोड लगानीमा सिङगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोक स्टार, अडिसन सुरु !
३ यस्तो कारणले ‘कालि बिल्ली’ भन्दै करिनाले बिपाशालाई लगाइन् थप्पड,
४ भारतीय मिडिया किन उर्लियो प्रिया प्रकाश विरुद्ध ?
५ अन्ततः कोमल वलीले गर्ने भइन् विवाह,को हुन् हुनेवाला पति ! सार्वजनिक गरिन् मिति
६ महेश भट्टले भाग्य चम्काइदिएका ५ अभिनेत्री
७ बलिउडकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडा फिल्ममा आउनु अघि यस्तो काम गर्थिन!
८ ८ सय मात्रै तलब भएकी नीताले यस्ता शर्त राखेकी थिइन् मुकेश अम्बानीसँग बिबाह को लागी!